Kumaan ahay Corona kadib!? - مركز الكتاب للبحوث والدراسات
نشرت بواسطة: عبدالعزيز عبدالله حسين في مقالات 12 أبريل، 2020	0 195 زيارة
Muddo kooban gudaheed ayay isku badashay nolosha 8 balyan oo qof!, isbadal la yaab leh oo galay meel waliba. Waxaa la xiray masaajidii iyo goobihii waxbarashada, waxaana istaagay isu socdkii dadka iyo safaradii!. Waxaa lasoo rogay in aanan la istaaban oo la kala cararo, waxaa loo dhigay dadka cashiro ah in ay kala fogaadaan, isa salaamin oo la kala durqo, waxaa soo kordhay wax loo bixiyay kala fogaanshaha bulshada (Social distansing)!.
Dadkii waa wareereen, sida uu 11 sano kahor saadaaliyay Dr Mustafa Maxmuud ayaana loo kala baxay “haddii uu Aadanaha ku habsado cudur faafo, dawladuhuna xirtaan xuduudada, dadkuna ku nagaadaan guryaha si uusan cudurka ugu dhicin, waxa ay u qeeybsami doonaan dadka labo qeeybood, qeeyb shaqeeyso habeeyn iyo maalin sidii ay u soo saari lahaayeen daawo, iyo koox kale oo sugayo masiirkoodu halka uu ku dhamaado”!.
Waxaa si degdeg ah indhaha caalamka oo dhan ugu soo jeesteen dhaqaatiirti, waxaa la hilmaamay si dhaqso ah fanaananiintii iyo ciyaaryahanadii, dadka oo dhanne waxa ay indhaha ku hayaan sida xawaaraha uu ku socdo cudurka, waxaana laga dhur sugayaa halka uu ku danbeeyn doona!.
Maxay galabsadeen muslimiinta si loogu diido in ay dawaafaan kacbada, maxay galabsadeen si iyaga oo u maqlayo aadaanka aanan loo ogoleeyn in ay galaan masaajidda?!. Maxay basharku guud ahaan geeysteen si loogu diido in ay dhacsadaan biilkooda, looguna qasbo inaysan guryahooda ka soo bixin?!. (Corona virus) ma uusan kala saarin faqiir iyo taajir, mana uusan kala aqoonsan wasiir iyo muwaadin, mana uusan xushmeeyn madaxweeyne iyo dhakhtar, dadki oo dhan ayuu cagta mariyay, isaga oonan xeerinayn diin, dal, qawmiyad gooni ah iyo jinsiyad khaas ah, waxa uu ka gudbay xuduuda, waxa uuna u kala gooshay qaarradaha isaga oonan wadan VISA gooni ah iyo baasaboor mid ah!.
Weeynaa Awoodda Eebe!. Virus aysan ishu arkayn ayaa hakiyay dhamaan dhaqdhaqaaqyadii basharka!. Laakiin waxaa cashir innoogu filan in cudurkaan inoo noqdo mid aan dib isugu milicsanno. Hoos u dhaca akhlaaqeed iyo kan aqooneed ee Aadanuhu la nool yahay xilligan ayaa mudan dib u milicsi!, maadaama uu Alle basharka ku gooni yeelay garaad uusan siin makhluuq kale, sidaane uu uga dhigay mudanaha makhluuqaadka kale, hadane banii Aadankii uma gudan amaanadii sidii loogu igmaday!, waxa uu ku tuntay uunkii kale, isaga oona is moodsiiyay inaysan jirin cid ka adag!.
Basharkii waxa uu waayay wixii ugu qaalisanaa ee uu haystay, waxa uuna ka dhar tirmay xishoodkii iyo Iimaankii, waxaa lagu baratamay xumihii, oo weliba la isugu faanay!, waxa uu dulmay basharkii walaalkiis, waxa uuna ku xad gudbay intii la noolayd, waxaa u sinnaaday xoolihii xaaraanta iyo kuwii xalaasha, wax waliba oo dhuuntiisa mari karana waa uu cunay!. Waxaa ka maqnaaday qaamuuska Aadanaha ereyada naxariista, is-cafinta iyo jaceeylka, waxaa fiday oo faafay ereyada cadaawadda, dulmiga, is-gooynta iyo xasadka, waxaana si heer sare ah banii Aadamku u dabaqeen xeerarka kaynta ee dugaaga, weliba wax ayay ku dareen oo casriyeeyeen iyo cusboonayn ayaa lagu sameeyay!.
Waxaa waxaas oo idil kasii foolxun in Eebe weeyne loo gafay, wax lala wadaajiyay, xaqiisina loo gudan si haboon!. Waxaa la rumeeystay in af-gashiga cuntada ee qofka ay ku jirto gacantiisa, aysanne ku jirin tan Eebe, markaas ayuu maleeystay basharkii in uu isku filan yahay, kii kale na waxaa cabsi ka gashay amaad wax weeydaa, markaasuu fadhi iyo farxad u diiday naftiisi, hadane kuma qanacsano waxa uu helo!.
Si waliba oo qaylidu u badato, shaki iigama jiro in cudurkan dhamaan doona, lagana soo gudbi doona, sidii looga soo gudbay dhibaatooyin aad uga weeynaa oo Aadanuhu la soo noolaadeen, balse waa in aan isku laabano, dib aan u milicsanno dhaqamadeena, sida uu caalamku isku badali doona Corona kadibne, aan u badalno nafteena!.
Ugu danbeeyn, Xabsiga iyo xeeyndaabka uu innagu soo rogay Corona Virus, waa fursad dahabi ah oo aan dib ugu laaban karno nafteenna, aan ugu nadiifin karno ruuxdeenna, aanna jawaab ugu heli karno “Kumaan ahaa CORONA kahor, kumaan ne noqon doonaa CORONA kadib”?!. Laakiin waxa ay sii ahaan doontaa su’aasha da’da weeyn, is weeydiinteeduna mashquulisay maankeeyga iyo maskaxda malaayiin dad ah “Illaa goormee ayaan kala fogaan doonnaa”?!.
Illaahay haa innaga dul-qaado cabsida iyo cudurada, Illaahayga ku badbaadiyay nebi Yuunis seddex mugdi dhexdood, ku badbaadiyay Muusa biyaha dhexdood, ka badbaadiyay Ciisa in la salbiyo, ka badbaadiyay Yuusuf ceelka, kana badbaadiyay Muxammad (NNKH) Qureeyshtii eryanaysay, haa innaga badbaaiyo innagana COVID19, ma jiro camal suuban oo weeyn oo aan sameeynay si la inoogu badbaadiyo sidooda oo kale, balse Alloow sidooda oo kale ayaan ku jecelnahay!.
Coronavirus Covid19	2020-04-12
الوسوم :Coronavirus Covid19
السابق: COVID-19 & HUMAN RIGHTS
التالي: قراءة في مسرحية “أمتنا الإسلامية في الصومال”